FITANDROANA NY FILAMINANA AO NOSY BE : Fiara maherin’ny 20 naiditra « Fourrière »
Gaboraraka. Manao izay danin’ny kibony avy ny mpamily Bajaj sy fiara any amin’ny distrikan’i Nosy Be. 19 août 2019
Vokany saika ahitana lozam-pifamoivoizana foana any an-toerana isan’andro ankoatra ny fitohanana aterak’izany. Niezaka nitondra vahaolana ireo tompona « auto—école » any an-toerana manoloana izany rehetra izany, ka nanentana ny tsirairay mba hanaja ny lalàna mifehy ny fifamoivoizana fa tsy nahitam-bokany. Maro ireo fiara na Bajaj mivezivezy tsy misy taratasy akory.
Manoloana izany rehetra izany nanomboka tamin’ny herinandro lasa teo niditra an-tsehana ny polisy nasionaly. Henjana ny fanaraha-maso ataon’ireto farany. Araka ny loharanombaovao voaray any an-toerana Bajaj sy fiara maherin’ny 20 no efa naiditra « fourrière » ary mpamily miisa 6 no efa natolotra ny Fitsarana noho ny tsy fananana fahazoan-dalana mamily.
Ny iray amin’ireto farany naiditra am-ponja vonjimaika noho ny faniratsirana ny mpitandro filaminana teo am-panatanterahana ny asany. Tsara ny manamarika fa roa hafa amin’ireo mpamily ireo dia teratany vazaha. Tanjona amin’izao hetsika izao, hoy ny polisy any Nosy Be, dia ny fampanarahan-dalàna ny rehetra ho fisorohana ny loza.